Myanmar Gays Heaven: Cristo Alex ရဲ့ Second Time ပါ
Posted by Myanmar Gays Heaven at 9:18 AM
Anonymous June 1, 2014 at 2:32 AM
iremember ကတော့လုပ် ချလိုက် ပြန် ပီ
Anonymous June 1, 2014 at 3:40 PM
Bot တ​ယောက်​အလိုရှိသည်​ မန်း​လေးက အသက်​၂၃ ပတ်​ဝင်းကျင်​ ဝတာစိတ်​မဝင်​စားပါ ကိုယ်​လည်းမဝပါ လီး၅လက်​မ​ကျော်​သည်​။ တင်​ထားသည့်​ပုံထက်​လန်းသည်​။ရုပ်​ရည်​အသင့်​တင့်​ဆိုရသည်​။စိတ်​ဝင်​စားပါက mail ထားခဲ့ပါ ။ viber မှ​ပြောမည်​ ။ကိုထက်​ (mdy)
Anonymous June 23, 2014 at 10:12 PM
အကောင့်က sexycrazy284@gmail.com ပါ အသားဖြူပါတယ် တောင်ကြိးသားပါ 110 ပေါင်ရှိပါတယ် အရပ်က 5ပေ4ပါ
Anonymous October 11, 2014 at 5:27 AM
Anonymous May 20, 2015 at 12:40 AM
Minthuaung Minthuaung November 19, 2015 at 11:32 AM
kyue March 11, 2016 at 8:06 PM
မန်းတလေးက အသက်35 ဖင်ခံချင်ပါသည် မနွဲ့ပါ စိတ်ဝင်စားရင် viber no. 09449971080
cutty boy June 2, 2014 at 11:47 PM
ပျဉ်းမနား နေပြည်တော်က T များနင့် တွေ့ချင်ပါတယ်
toponlyman July 11, 2014 at 12:53 AM
ပျဉ်းမနားက T ပါ အကောင့်က topoonlyman@gmail.com ပါ
Anonymous October 25, 2014 at 3:21 AM
ပျဉ်းမနားက ဆို စိတ်ဝင်စားတယ်
Anonymous October 26, 2014 at 4:03 AM
Anonymous June 3, 2014 at 4:49 PM
I like u.how I contact u?
Anonymous June 3, 2014 at 7:51 PM
Like ရင်​ mail​ပေးပါအပ်​ပါမယ်​ gtalk မှာ​ပြောမယ်​ ကိုထက်​mdy
လိုးချင်တယ် i am top, ph no ထားခဲ့ပါ အခုချက်ခြင်းတွေ့ပြီလိုးပါမည်
YANGON REGION, THANLYIN TOWSHIP.
hmuehtet pyingkyaw June 8, 2014 at 4:12 PM
Anonymous June 19, 2014 at 1:15 PM
သန်လျင်ကဆိုခံချင်ပါတယ်ဆက်သွယ်နော် 09 43180949
I live in thanlyin.i am bot.i want top from thanlyin.si connect me.
Anonymous October 11, 2014 at 8:35 AM
thein htike June 3, 2015 at 7:26 AM
ထီလာ ကဆို စိတ်​ဝင်​စားလို့
Anonymous June 18, 2014 at 3:58 AM
ရန်ကုန်ကပါ Top တစ်ယောက်လောက်လိုချင်ပါသည် (နိုင်နိုင်)
Anonymous January 31, 2015 at 10:10 PM
Anonymous June 26, 2014 at 2:41 PM
sponsor ‌ပေးလို‌သော ဦးဦး bottom များဆက်‌သွယ်‌ပါ 0943113627 top only
Venkatesh D October 23, 2015 at 10:09 PM
Anonymous July 3, 2014 at 12:15 AM
လတိုးကိုများစိတ်ဝင်စားနေသေးတယ်လာခဲစန်ပါကိုဆီးကိုလိုးနည်း၁၂ကွက်အကုန်တက်တယ်စိတ်ဝင်စားရင် viber မှာဆတ်သွယ်လိုက်ph ဃ ဝ က ဆ ခ ဆ ခ ဃ ဇ ဆက်သွယ်လိုက်
ပော့ ကောင် ကို့ပုံကို မတင် ၇ဲပဲုပုဆိုးခြုံထဲက လက် သီးပုန်းမပြနဲ့။
Anonymous July 9, 2014 at 4:13 PM
Anonymous August 28, 2014 at 5:54 AM
i am also from tgi Where shoukd we meet?and when and what is ur ph
thein garra May 5, 2015 at 1:22 PM
Anonymous July 21, 2014 at 12:29 AM
R u Hiv merchant
Anonymous August 2, 2014 at 1:41 PM
Anonymous August 11, 2014 at 6:09 AM
taunggyi ka shi lar
shi tal. Role ka B. မိန်း ကလေး တော့ မဆန် ဘူး။ Thetpaing724@gmail.com. Ph no 09428374520
09974450495 ကို​ခေါ် viber မှာ​ပြောမယ်​ ကိုထက်​
bottom ချစ်သူ အလို
နေ ရာ ရှိသူ ဦးစားပေးမည်
တ ယောက် ဆို တ ယောက်
ပဲချစ် ချင် ပါတယ်
Anonymous August 13, 2014 at 2:48 PM
ချစ်သူ အလို ရှိသည်
တ ယောက် ဆို တ
ယောက် ပဲချစ် ချင် ပါတယ်
နေရာ ရှိသူ ဦး စား ပေးမည်
ဘွဲ့ ရ ရမည်
အသက် ၂၅ နှစ်ပါ
Anonymous December 3, 2014 at 2:50 AM
OK အသက်ချင်းလည်းတူတယ် ကျနော်လည်းတစ်ယောက်တည်းဘဲအတည်တကျချစ်ချင်ပါတယ် BE(Mech) နဲ့ ကျောင်းပြီးပါပြီ နှစ်ယောက်အတူလက်တွဲပြီးစီးပွားရေးတစ်ခုလည်းထူထောင်ချင်ပါသည်
Anonymous January 28, 2015 at 1:32 PM
Yome. Laymha August 16, 2014 at 1:32 PM
ph 0931592991မကန ကပါ
Anonymous August 22, 2014 at 12:18 AM
အဲ့တာမင့်​ဖုန်းဟုတ်​ရဲ့လား viber မှာ​ပြောကြည့်​တယ်​ မဟုတ်​သလိုပဲ
Anonymous August 17, 2014 at 4:10 AM
Anonymous August 20, 2014 at 3:28 AM
Anonymous August 19, 2014 at 8:09 PM
လားရှိုးက အလိုးခံချင်​သူများ ဖုန်းထားခဲ့ပါ လိုးရန်​​နေရာရှိရမည်​ မနွဲ့ရ အပြုအစု​ကောင်းရမည်​ ခံနိုင်​သ​လောက်​ လိုး​ပေးမည်​ လီးစိတ်​တိုင်းကျဖြစ်​​စေရမည်​
lso ကပါ gmail acc ထားခဲ့လေ အပ်လိုက်မယ် ပြီးမှ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြောပြမယ်.. လူတွေသိကုန်မှာစိုးလို့ပါ....
Anonymous August 20, 2014 at 9:56 AM
ko chan June 26, 2016 at 7:26 PM
အကုန်​တာဝန်​ယူမယ်​ gtalk acc ရှိရင်​​ပေး​လေ
ဖုန်းနံပါတ်​​ပေး​လေ ကျွန်​​တော်​က offer ​တော့မဟုတ်​ပါ လူတစ်​​ယောက်​ပဲ လိုး​ပေးနိုင်​မယ်​ လူများရင်​​တော့​ဆောရီးပါ ​​ဆေးသုံးထားတဲ့လီးမဟုတ်​ပါ အထင်​​တော့မ​သေးပါနဲ့ ပြီးမှ မခံနို​​င်ေ​တာ့လို့ပါဆိုပြီး ​တောင်​ပန်​ရင်​​တော့ မရပါ
Anonymous September 20, 2014 at 12:12 PM
ခံချင်​တယ်​ ဖုန်းနံပါတ်​ ​ပေး​လေ
Anonymous August 21, 2014 at 12:19 AM
တို့ကလည်းတစ်​​ယောက်​ထဲ ပါ ယူကို​တော့အရမ်းစိတ်​၀င်​စားသွားပြီ phကိုဒီက​နေအ​ပေးချင်​ဘူး ဖြစ်​နိုင်​ ရင်​ ယူph ​ပေးနိုင်​မလား viberမှာ ​တွေ့မယ်​​လေ ဒါမှမဟုတ်​ရင်​ cakecreamx@gmail ကို ph no ​ပို့​ပေးပါ တကယ်​sex ဖြစ်​ချင်​တယ်​
Anonymous August 28, 2014 at 5:46 AM
Anonymous August 28, 2014 at 5:48 AM
i am from taunggyi
koko September 15, 2014 at 9:28 PM
leo man September 21, 2014 at 3:09 PM
Anonymous September 24, 2014 at 3:49 PM
ရန်ကုန်က ဖင် ခံ
လီး စုပ် ချင် သူ များ
နေ ရာရှိ ရင်
john September 25, 2014 at 10:50 PM
ရုပ် ရည် အတင့်အသင့် ဆိုးတဲ့အထဲ မပါ
win kyaw December 17, 2014 at 5:52 PM
Anonymous October 4, 2014 at 5:32 PM
Anonymous October 11, 2014 at 4:57 AM
Anonymous October 13, 2014 at 8:34 PM
Anonymous October 21, 2014 at 2:31 AM
Yan Naing January 9, 2015 at 8:53 AM
kk October 21, 2015 at 9:25 PM
ko chan June 26, 2016 at 7:16 PM
ko chan June 26, 2016 at 7:27 PM
kyue November 12, 2015 at 7:36 PM
Anonymous October 12, 2014 at 7:03 AM
mg myo win December 21, 2014 at 10:06 AM
Anonymous October 12, 2014 at 10:20 AM
I want to friend wt mm ygn,mdy 09402556578!
ပူစီစက်​ကာ October 15, 2014 at 2:42 AM
လီးအရှည်​ ၆ လက်​မခွဲ
Anonymous November 10, 2014 at 9:08 AM
ဖင်ခံချင်​ပါတယ်​ cakecreamx@gmail.com ပါ
kk October 21, 2015 at 9:36 PM
ပါးစပ်ရော ဖင်ပါ ပြဲစိုနေအောင်မှုတ်ချင်အလိုးခံချင်တယ်
kyue March 11, 2016 at 8:10 PM
Prince Shine October 16, 2014 at 2:02 AM
Anonymous October 16, 2014 at 12:43 PM
kyue November 12, 2015 at 7:37 PM
09256277226 viber use
Anonymous October 16, 2014 at 12:46 PM
ygn ကbotများ ငွေရှိ
Anonymous January 29, 2015 at 1:37 PM
Anonymous November 28, 2014 at 12:07 AM
ပုံပိုင် ရှင် ပါ သငိ့တင့်တဲ့ ကြေးရ ရင် offer လိုက်ပါမယ် npt only ပါ
09798220252 ပါ ။
Anonymous November 4, 2014 at 9:36 PM
09425301542 Top Npy
Anonymous November 17, 2014 at 12:07 PM
min naing May 11, 2017 at 12:11 AM
Anonymous November 11, 2014 at 8:47 AM
fri လိုတယ် ချစ်သူလိုတယ်
Anonymous November 11, 2014 at 8:49 AM
​ဝေလင်း November 11, 2014 at 8:24 PM
ရန်​ကုန်​ကပါ ဘွိုင်းဖရန်​လိုချင်​ပါတယ်​ viber 09799853638
thuyamin November 15, 2014 at 2:52 PM
adiba akter November 18, 2014 at 10:00 AM
Anonymous November 25, 2014 at 8:16 PM
naymin soe November 26, 2014 at 8:43 PM
Anonymous December 7, 2014 at 1:04 AM
မျိုးတူတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်... ပုန်းနေမှ ဒုခ
Minthuaung Minthuaung November 19, 2015 at 11:34 AM
Anonymous May 4, 2017 at 9:19 AM
တကယ်လား ဆက်သွယ်နိုင် မဲ့ ph ပေးလေ
Anonymous November 26, 2014 at 10:06 PM
post ကို ဖတ်ပြီး တအားခံချင်လာတယ် အရမ်းပဲ လိုးပေးကြပါ
naymin soe November 26, 2014 at 10:35 PM
อภิสิทธิ์ เกื้อปัญญา December 6, 2014 at 2:04 AM
R u handsome.MR.bigcock
yes handsome. give me contact phone.I am homo
Anonymous December 13, 2014 at 11:48 PM
Anonymous December 17, 2014 at 6:50 AM
Anonymous January 29, 2015 at 1:44 PM
Anonymous December 21, 2014 at 1:02 AM
I like this photo and send me gmail, ygn only, 1hnaryuu@gmail.com
Anonymous December 22, 2014 at 11:56 PM
Mg Maung June 4, 2016 at 3:05 AM
ရန်ကုန်က။ ဖင်ကုန်းပြမယ်- ဖင်လိုးပေးပါ & နို့ သီးကောင်းမွန်စွာ စူ ထွက်
နေ ရာရှိရင် အခု ခေါ် ပါ | မနွဲ့ဘူးတကယ်ခံမယ် Viber/Ph: 09253723077
Pisces Prince November 9, 2015 at 4:50 PM
royallover22 December 28, 2014 at 7:59 AM
Tgi ka chi lar lote ma loe chi yin contact me
thuyamin December 30, 2014 at 5:06 PM
Anonymous January 5, 2015 at 11:03 PM
ပခုက္ကူကရှိလား ဖုန်းထားခဲ့ပါ ​နေရာရှိရမည်​ အလကားလိုး​ပေးမည်​
Anonymous January 30, 2015 at 10:56 PM
့ချစ်သူတစ်ယောက်လိုချင်ပါသည် မနွဲ့ရပါ အသက်က၁၆ပါ
Anonymous January 30, 2015 at 11:02 PM
role က ver. Ygnကပါ
Respect Respect February 13, 2015 at 7:34 AM
kaung lay February 24, 2015 at 10:29 AM
Moe Thauk February 23, 2015 at 3:33 PM
young young March 12, 2015 at 5:27 AM
Anonymous March 30, 2015 at 9:57 PM
ွှTun Tun September 24, 2016 at 2:06 AM
Anonymous March 13, 2015 at 12:42 AM
သုခကိုလိုးချင်တယ်မန္တလေးကtop only ပါ
Anonymous April 2, 2015 at 10:44 AM
aung kyawhtun April 10, 2015 at 4:16 AM
saiyin gyeit April 28, 2015 at 9:27 AM
Hello Handsome Guys Out There...... I m looking foraboyfriend. Gay Homo Guy....from Ygnn......Contact me on Viber or Phone call 09420186635~~[[[[
Anonymous April 1, 2015 at 2:16 AM
ကုလားလီးနဲ့ ခံချင်သည်။ နေရာရှိသည်။ mantomanboy@gmail.com
love me1500 May 28, 2015 at 2:36 PM
ye thu April 1, 2015 at 9:13 AM
Anonymous April 14, 2015 at 1:14 AM
Pisces Prince November 9, 2015 at 5:03 PM
Anonymous April 8, 2015 at 12:50 AM
Anonymous April 9, 2015 at 8:42 AM
ကျား ကျား ချင်းပဲတွေ့ချင်တယ်
Anonymous June 6, 2015 at 9:00 AM
Anonymous April 19, 2015 at 7:56 AM
ခင်တတ်ပါတယ် ချစ်တတ်တဲ့ချစ်သူ အကိုတစ်ယောက် လိုချင်ပါတယ်09975998145
saiyin gyeit April 19, 2015 at 9:06 AM
မ က န ကို လာ လိုး ပေး နိုင် တဲ့ ခတ် ချော ချော ကောင် လေး ၁ ယောက် လောက် စ ရိတ် ပေး မည်
Anonymous April 21, 2015 at 11:07 PM
Anonymous April 25, 2015 at 4:07 AM
0973018558 I have viber
viber09797508802 mdy want top
usanminn mg August 14, 2015 at 3:19 PM
Contact me 09797762050 I am Top.
Anonymous June 6, 2015 at 6:53 PM
Top Nay Pyi Taw
Anonymous June 11, 2015 at 5:02 AM
Bo Bo June 19, 2015 at 11:45 AM
ygn က bot ပါ။ ယောကျာ်းပီသပြီး body တောင့်တဲ့သူနဲ့
Naing Tun June 23, 2015 at 10:29 PM
Pisces Prince November 9, 2015 at 4:39 PM
Anonymous July 1, 2015 at 8:25 AM
mdyက i'm man i need man 798867912
zayar July 28, 2015 at 7:16 PM
Bo Bo July 29, 2015 at 4:23 PM
Anonymous August 7, 2015 at 12:54 PM
Ver.. Phin Loe Phin Khan
24, 5'8'', yoke ma soe par, YGN ka par..
Group sex lae loe chin khan chin tal
Girl underwear tway wit pee sex lote chin par tal
kyawswarman.ygn@gmail.com ko sat thwal par...
Anonymous August 19, 2015 at 8:57 PM
69 စိတ်ဝင်စားသူအမှုတ်ခံချင်သူအပြန်အလှန်လုပ်လိုသူကျား ကျား ချင်းနှစ်သက်သူများviber 09791798400
Anonymous August 21, 2015 at 4:54 AM
０９７３０１８５５８　ygn viber
kyue November 12, 2015 at 8:08 PM
Anonymous August 22, 2015 at 12:36 PM
myothu tun January 23, 2016 at 11:42 AM
လိုးပေးမယ် ဖုန်း ပေးပါ
chitt3433 January 27, 2016 at 12:50 AM
အသက်ငယ်တော့ တခါမှမခံဘူးခံကြည့်ချင်တယ် ဗျာ
myo min September 19, 2015 at 3:29 PM
Iron Dragon September 20, 2015 at 3:14 AM
ngel lay November 17, 2015 at 8:54 AM
Anonymous March 24, 2016 at 9:53 AM
ပျဉ်းမနားမှ ခံချင်သူ 0979 562 9421 ကို
Anonymous April 24, 2016 at 8:33 PM
Anonymous June 14, 2016 at 8:27 AM
naungnaung286 July 9, 2016 at 1:22 AM
ဘယ်ကလလဲ ဆက်သွယ်ဖို့ ph နံပါတ်ထားခဲ့ပါ
Anonymous July 13, 2016 at 1:14 PM
kyalsin moe July 29, 2016 at 12:14 AM
kyalsin moe July 29, 2016 at 12:40 AM
kyawmin kyawmin528 December 21, 2016 at 9:15 PM
kyawmin kyawmin528 December 21, 2016 at 9:35 PM
Npt 09773591312 just offer
Anonymous May 2, 2017 at 10:53 AM
ခံချင် တယ် လီးစုပ် ချင် တယ် တကယ်ဆက်သွယ်လို့ရမှာလား
Anonymous February 27, 2017 at 8:12 AM
Anonymous May 2, 2017 at 10:56 AM
ငါလည်း ဖင်​လိုးချင်​​နေတာကွာ ။
Anonymous May 2, 2017 at 11:02 PM
ဖုန်းနံပတ်ထားခဲ့လေ viber သုံးလား
minye htet April 23, 2017 at 12:13 AM
mdy ကပါ ချစ်သူလိုချင်လို့ ဘယ်သူလုပ်မလညါး
Top Koko May 10, 2017 at 9:09 PM
ဖင်လိုးပေးမယ် Top တယောက်ပါ နေပြည်တော် တပ်ကုန်းကပါ
Lucky boy December 18, 2017 at 3:07 AM